Sidee Vermont u caawineysaa dhalinyarada inay ka baxaan Vaping - 802Quits
Bogga ugu weyn » Caawinta Joojinta Qiiqa Dhalinta
CAAWINTA CARRUURTA WAA DHAMMAAN DADKA DARYEELKA JOOJI JOOJINTA
802Quits waa adeeg ku saleysan cilmi baaris oo ka socota Waaxda Caafimaadka Vermont kaas oo ka caawin kara dhallintaada inay si guul leh uga joojiyaan qiiqa.
Ku dhowaad 20 sano, Vermont Quitline wuxuu ka caawiyay kumanaan reer Vermonters inay garaacaan qabatinka nikotiinka. Si la mid ah qabatinka sigaarka, qabatinka uumiga ayaa caqabad ku ah in laga adkaado, laakiin taageero ahaan, dhallintaada ayaa joojin kara xiiqda oo bilaabi karta inay kobcaan.
Inaad kala hadasho dhallintaada ku saabsan uumiga maandooriyaha way adkaan kartaa, laakiin waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno.
Si loo hagaajiyo fursadahaaga joojinta dhallintaada, waxaa muhiim ah in dhaqso wax looga qabto. La xiriir tababaraha joojinta nikotiinta tababaran hadda si aad uga jawaabto su'aalahaaga, wax badan uga baro barnaamijkeenna oo ka caawi ilmahaaga dhallinyarada ah inay u diyaargaroobaan joojinta qiiqa.
Ogow Calaamadaha Balwadda
50% ka mid ah dhalinyarada Vermont waxay isku dayeen inay neefsadaan
Miyaad aragtaa isbeddelo ku dhaca niyaddaada ama rabitaankaaga cunuggaaga? Raadinta gulufyo iyo aalado aadan aqoonsaneyn?
Calaamadaha Daroogada nikotiinka ee dhallinta:
Xiisaha yar ee howlaha
Koox cusub oo asxaab ah
Baahida loo qabo lacagta
Haddii aad ku jawaabtay “haa” mid ka mid ah su'aalahan, dhallintaadu waxay yeelan karaan qabatin nikotiin ah, waana muhiim in loo helo taageerada ay u baahan yihiin.
¹Sahanka Dabeecadda Khatarta Dhallinyarada 2019 ee Vermont
Adiga iyo Dhallintaada Kali Maaha
1 ka mid ah 4tii dhalinyaro ah ee reer Vermont ah ayaa kacsan bishii la soo dhaafay
Lambarkan waa mid laga naxo sababta oo ah saameynta ay nikotiinku ku yeelan karto caafimaadka ilmahaaga. Dhallintaada waxay u maleyn kartaa in uumiga uu kafiican yahay cabida sigaarka, laakiin vape aerosol waxay kakooban karaan ilaa 31 kiimiko oo kaladuwan oo sanbabadaada kuso kici kara waqti kadib, taasoo dhalinta u keenta inay xanuunsadaan, ama kaba sii daraan.
Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad keligaa la kulanto dhibaatada uumiga. Waalidiinta halkan iyo guud ahaan Mareykanka waxay taageero ka helayaan adeegyada sida 802Quits. Kooxdayada tababaran ee khubarada ah iyo istaraatiijiyado la xaqiijiyay ayaa ka caawin kara dhalinyarada inay siiso kalsooni iyo qalab ay ugu baahan yihiin inay kaga adkaadaan qabatinka nikotiinka si wanaagsan.
Maandooriyaha nikotiinka ma aha cilladda ilmahaaga
Fawaxaduhu ma soo saaraan uumiga biyaha ee aan waxyeellada lahayn. Waxay ka buuxaan nikotiin si balwad leh u qaata - hal vape ayaa yeelan kara sida ugu badan xirmo sigaar ah oo dhan.
Dhalinyarada badankood ma yaqaanaan uumiga inay kujiraan nikotiin waqtiga ay doonayaan inay joojiyaanna waa goor dambe. Waa la qabatimay.
Maskaxda qaangaarka ah wali wey horumaraysaa, sidaa darteed soo-gaadhista nikotiinka ku jira uumiga waxay sababi kartaa waxyeelo muddo-dheer ah iyadoo la beddelayo habka isku-xidhka maskaxda loo sameeyo. Tani waxay si joogto ah u beddeli kartaa dareenka dhallintaada iyo awoodda uu u leeyahay inuu waxbarto. Si dhakhso leh u qaad tallaabo iyo iskaashi aad la yeelatid dhallintaada si aad u abuurto qorshe joojis ku habboon ayaa fure u ah ka caawinta inay joojiyaan.
Tilaabo Degdeg ah qaado
Caawimaad la'aan, balwadu way ka sii dari kartaa. Si kastaba ha noqotee, waxaad qaadi kartaa tallaabooyin si aad mustaqbalka dhallintaada uga dhigto mid ifaya.
802Quits waa mid sir ah oo leh dabacsanaan, taageero 24/7 si loogu waafajiyo nolosha qoyskaaga ee mashquulka badan.
La xiriir nikotiintayada tababaran Tababarayaasha Jooji si loo abuuro istaraatiijiyad ku habboon oo loo qoondeeyey iyo qorshe joojin shaqsiyeed oo loogu talagalay dhallintaada.
Noloshayda, My Quit ™ waa adeeg bilaash ah oo qarsoodi ah kuwa 13-17 ee doonaya inay joojiyaan dhammaan noocyada tubaakada iyo qiiqa.
Noloshayda, My Quit ™ waxay siisaa ilo waalidiinta raba inay door firfircoon ka ciyaaraan safarka joojinta dhallintooda. Kaqeybgalayaashu waxay helayaan:
Helitaanka Tababareyaasha Joojinta Tubaakada oo leh tababar khaas ah oo ku saabsan ka hortagga tubaakada qaangaarka ah.
Shan, kal-fadhiyo tababar hal-hal ah. Koorsadu waxay ka caawisaa dhalinyarada inay horumariyaan qorshaha joojinta, aqoonsiga waxyaabaha kiciya, ku celcelinta xirfadaha diidmada iyo inay helaan taageero joogto ah oo ku saabsan dabeecadaha beddelaya.